Iibhegi → iimpahla zokubhengeza • ubuchwephesha be-P & M yobuchwephesha
Iingxowa zentengiso Lulwazelelo oluphambili lwentengiso, kodwa ikwangumboniso osebenzayo wenkampani. Ingxowa enemizobo esemgangathweni ophezulu, ngaphandle kokusetyenziswa kwayo, iya kumela uphawu ixesha elide.
Iingxowa zentengiso eziprintwe kunye nendawo efanelekileyo yokuthengisa
Izixhobo ezisebenzisekayo zihlala zisisipho esamkelekileyo, kwaye enkosi kwifom yazo elula, zenza ukuba zikwazi ukumakisha malunga nayo nayiphi na imizobo kunye nayiphi na indlela yokumakisha. Ngombulelo kwezi mveliso zentengiso, uphawu lunokufumana ukuthandwa ngakumbi kunye nabaphulaphuli abatsha. Esi sisisombululo esihle kakhulu ukuba umthengi akafuni ukuchitha imali eninzi kwintengiso.
Iingxowa zezinye zeendwangu zentengiso ezingabizi kakhulu, kwaye kwangaxeshanye ziyamelana nezinto ezingalunganga zangaphandle. Ukongeza, xa sisebenzisa iibhegi ezinokuphinda zisetyenziswe, siyayikhathalela imeko-bume, eyongeza ukufudumeza umfanekiso wenkampani. Uluhlu olubanzi lwemibala likuvumela ukuba ukhethe iimveliso kwimibala yenkampani okanye yeklabhu. Ixabiso eliphantsi leebhegi kunye neelebheli zinokuba sisipho esihle kubahlobo okanye usapho ngexesha leholide okanye eminye iminyhadala.
Sineengxowa zokubumba ngaphakathi kwivenkile iingxowa ezinombala we-fluorescent tyheli ngombala obonakalisayo. Eso siphakamiso songeza ukwanda kokubonakala, ngakumbi ekwindla nasebusika amaxesha onyaka nasemva kobumnyama. Enkosi kwimitya, ibhegi inokubekwa ngasemva kwaye ke yonyuse ukubonakala kwayo endleleni.
Inkampani yethu inepaki yayo yoomatshini. Siyakwazi ukwenza ukushicilelwa oyimfakamfele ngekhompyutha, yoshicilelo screen okanye ukudluliselwa kwe-thermo, eyenzelwe ulindelo lwabathengi.
Inkqubo eyahlukileyo ilungiselelwe umzobo ngamnye, ngesiseko sokumakisha ngokuthe ngqo kwilaphu emva koko kwenziwa. Siqinisekile ukuba isiphumo siya kuhlangabezana nokulindelweyo, kwaye siqinisekile ukuba isiphumo sokugqibela siya kuyonwabisa nakwezona zinzima kakhulu.
Enkosi kwimizobo eyilelwe ngokwesiqhelo, imveliso iya kufumana imbonakalo eyahlukileyo. Uyilo olunjalo aluhlali luthandabuza kubamkeli. Sinikezela ngeemodeli ezahlukeneyo ezikhoyo ngemibala emininzi. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda unxibelelane nathi ukuphathaeya kuphakamisa elona khetho lilungileyo.
Iingxowa zentengiso banenzuzo yabo enkulu - ixabiso eliphantsi. Kungenxa yexabiso eliphantsi abantu abaninzi abakhetha le mveliso kwii-odolo ezisasazwa kakhulu. Ukusetyenziswa kwawo ngokungafaniyo kukuvumela ukuba wenze amasheya anokusetyenziswa nangaliphi na ixesha lonyaka kwaye nakweyiphi na imeko. Ukongeza, kwimeko yoshicilelo, ixabiso lixhomekeke kwivolumu- enkulu iodolo, isezantsi ixabiso leyunithi.
Sinikezela simahla kwaye ngokukhawuleza iprojekthi uqikelelo lwamaxabiso. Izinto eziqinisiweyo kunye nezinto eziqinileyo zisetyenziselwe ukuthunga iingxowa, konke ukunciphisa ukubakho kokukrazuka, ukukrwada kunye nokuhambisa imveliso eza kusebenza iinyanga ezininzi.
iingxowa zomqhaphu ezino shicileloIingxowa ze-eco kunye nokuprintaIingxowa ze-eco kunye nokuprinta kwakhoIingxowa ze-eco kunye nokuprintaiingxowa zelinen ezinoprintaiingxowa zephepha eziprintiweyoiingxowa zomqhaphu eziprintiweyoiingxowa zomqhaphu ezinoluhlu lwamaxabiso oluprintiweyoiingxowa zomqhaphu kunye nokuprinta kweLubliniingxowa zomqhaphu kunye nokuprinta iWarsawiingxowa zomqhaphu ezino shicilelo lwakhoiingxowa zomqhaphu kunye neprinta yakho iWarsawIingxowa ze-eco kunye nokuprintaIingxowa ze-eco zomqhaphu kunye nokuprintaIingxowa ze-eco kunye nokuprintaIingxowa ze-eco kunye noqobo lwakhondeva iingxowa ezinoprintaiingxowa ngefoyile nge yoshicileloiingxowa ngefoyile ye kuluhlu lwamaxabiso eprintiweyoiingxowa elaminethiweyo kunye noshicileloiingxowa zelinen ezinoprintaiingxowa zelinokuprintaiingxowa zokuthenga kunye noshicileloiingxowa zephepha eziprintiweyoIingxowa zamaphepha ezinoprinta we-allegroUluhlu lweengxowa eziprintiweyo uluhlu lwamaxabisoIingxowa zamaphepha kunye nokuprinta kweKrakowIingxowa zamaphepha kunye nepoznań yokuprintaeshicilelweyo iingxowa iphepha umenziIingxowa zephepha eziprintiweyo zitshiphuIingxowa zamaphepha kunye nokuprintwa kweWarsawIingxowa ze-canvas ezine-overprintIingxowa ze-canvas kunye neprinta yakhoiingxowa ezinepolypropylene kunye noshicileloIingxowa zezipho ezinoshicileloeziprintiweyo iingxowa zokubhengeza iphephaiingxowa zokwazisa kunye noshicileloIingxowa zentengiso ezinoluhlu lwamaxabiso ashicilelweyoIingxowa zentengiso kunye nepoznań yokuprintaIingxowa zentengiso kunye nokuprintwa kweWarsawIingxowa zentengiso ezishicilelweyoiingxowa zamadlavu eziprintiweyoiingxowa zelinokuprintwaiingxowa eziprintiweyoIingxowa ezineprinta ye-allegroiingxowa zesiko eziprintiweyoiingxowa ezinoshicilelo- ngexabiso eliphantsiIingxowa ezineprinta yaseWarsawiingxowa ezineprinta yakhoiingxowa zokuthenga kunye noshicilelo